Amanqaku e-NHL aneeLebhu ze-GB -I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi oMiselweyo weNAB Show-NAB BONISA LIVE
ikhaya » iindaba » Amanqaku eNHL aneeLebhu ze-GB
Aldermaston, UK, 12 Agasti 2019 -I-Labs ze-GB, abavelisi bezisombululo ezinamandla nezilumkileyo zokugcina imithombo yeendaba zosasazo nezokuzonwabisa, ivakalise ukuba iNorth League National Hockey League yaseNorth America (i-NHL) ithenge inkqubo yee-GB Labs 'MiniSPACE SSD 1RU system.
Omnye wabaqhubi bokuhamba kwe-NHL kwiiLebhu ze-GB yayiyimfuno yeligi yokugcina ukusebenza okuphezulu okudityaniswa ngokulula kwezothutho. Inkqubo yayo ekhoyo yokugcina ibonakalisile ukuba ayithembeki, ihlupheka kukungasebenzi kakuhle kunye nokungakwazi ukuthwala.
I-GB Labs i-Akhawunti ye-Akhawunti ye-North America u-John Alaimo uthe, "Into ephambili kwinto ebhenele kwi-NHL malunga ne-SPACE SSD kukubanakho kokunikezela ngaxeshanye kokungena kunye nokunxibelelana ngqo nabahleli abaninzi, kuvula amathuba amaninzi okuhanjiswa kweqonga elininzi Umxholo otyhidiweyo. Kwaye ngaphezulu kwesantya sodidi lwe-SPACE SSD, ibonelela ngentsebenzo, ukuxhomekeka, kunye nokuthembeka ababekade benako ngaphambili. "
Ukulandela iingxoxo, iligi ikhethe i-Labs 'MiniSPACE SSD 1RU yokuthatha isisindo sokukhanya, isantya esiphezulu, i-SSD ekhawulezayo, kunye nokuthembakala kunye nokusebenza kweLebhu yeLebhu' ekhutshiwe yeCORE.4 OS.
Inkqubo ye-NHL's MiniSPACE SSD 1RU yokugcina ngqo abahleli abasibhozo; i-data wrangler edityaniswe yi-10GbE yokusebenza ephezulu ukuze ifumane i-1000MB / s I / O; kunye ne-24-port yokutshintsha iimeko xa kufuneka abahleli abongezelelweyo.
Inkqubo yee-Labs ze-GB zenza ukuba iqela lemveliso le-NHL lihambise ngokulula inkqubo yalo yokugcina kunye nokuhlela ngokuthembekileyo ngokupheleleyo kwindawo apho lifuneka khona.
IiLebhu ze-GB ziyinkokeli yehlabathi ekugcinweni kwemithombo yeendaba, ukudala indawo ekwabelwana ngayo yogcino lweshishini losasazo. Ngokuqonda iingxaki zeshishini lehlabathi lokwenyani, iiteknoloji ezinqamlezileyo zenzelwe isoftware ene- "CORE" ekhethekileyo ezalisekisa iimfuno zabasebenzisi. Nokuba yeyiphi na imveliso efilwayo, ukuba likhulu kangakanani iqela okanye ubungakanani bohlahlo-lwabiwo mali, iiLebhu ze-GB zinokubonelela ngesisombululo sokuqinisekisa ukuba ixesha elimiselweyo liyafikelelwa kwaye kuyo yonke inkqubo, umxholo ukhuselekile.
Uqhagamshelwano lwenkampani yeBab Lab
Ukuqhagamshelana kweeLebhu zeMB
Ifowuni: + 44 (0) 7899 977 222
Ukukhutshwa kwe-birdDog kwe-P4K -Ikhamera ye-4K epheleleyo ye-bandwidth NDI® PTZ ebonisa i-1 - Septemba 16, 2019
I-ESL inyula i-Intinor yeziganeko zeflegi ye-logo - Septemba 11, 2019
I-Hitomi kunye neNkqubo ye-Broadcast ye-Wireless ziya kukhupha ungqamaniso kunye nolungelelwaniso lwemveliso ekude kwi-IBC 2019 - Septemba 11, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo I-CORE.4 OS Abahleli Iibhanki zeBH INGEST Isisombululo sokugcina se-Media I-MiniSPACE SSD 1RU Bee Intshona Melika National Hockey League ISithuba se-SSD Iintetho kunye nemisrya Ssd yoGcino I-Ultra HD Forum	2019-08-12
Previous: Itshintshiselwano lweTouch kunye neMTI Teleport yokwandisa ukufikelela kwihlabathi kukuhanjiswa kokuqukethwe
next: Umvelisi kunye noMculi uPaul Gala ugxotha uMgangatho wePFCXXUMX Monitors